ကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအလုပ်အကိုင်များ | USAHello | USAHello
နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
နည်းပညာမဆို tool ကိုလူတွေကသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့တွင်, နီးပါးတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အရေးအပါဆုံး Tool ကိုကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်. သင်ဤအရေးကြီးသော tool ကိုသုံးနိုငျပါလျှင်, သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ. ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအများအပြားကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်. အလုပ်အကိုင်သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူထပ်, ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဧညျ့မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှ. ဤသူအပေါင်းတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလူလိုအပ်ပါတယ်.
ကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင်များကိုမကြာခဏသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာလို့ခေါ်ပါတယ် (အိုင်တီ). တစ်ခုကအိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်:
coding များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း - ပရိုဂရမ်မာတိုင်း program ကိုနောက်ကွယ်မှသောကုဒ်ရေး. လေ့ကျင့်ရေးကအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသည်နှင့် Entry-level ကိုအလုပ်အကိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစတင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
Web development - ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း website တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျကိုယျအဘို့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ – စီမံကိန်း၏မန်နေဂျာကွဲပြားခြားနားအိုင်တီပညာရှင်များ၏အသင်းများကိုအတူတကွဆောင်ကြဉ်းနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့. သူတို့တစ်စီမံကိန်းကို / ရည်မှန်းချက်ဆီသို့ထိထိရောက်ရောက်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကူညီ. သင်ကြား တစ်ဦးအိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို.
analytics နှင့်အချက်အလက် - ပိုပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများငွေရှာဖို့ဒေတာကိုသုံးပါ. တစ်ဦးက data တွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေထုတ်လုပ်ရန် data တွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်.
လုံခွုံရေး - data နဲ့စနစ်ကလုံခြုံရေးအများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရန်အရေးကြီးပါသည်. ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောအကွက်ဖြစ်၏.
အုပ်ချုပ်သူ - အိုင်တီအထူးကုနှင့်ကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကုမ္ပဏီ၏စနစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်. သူတို့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်သေချာအောင်နှင့်ဝန်ထမ်းလိုအပ်ပါတယ်ဘာလုပ်နေလဲ.
ကနျြးမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင် (HIT အမျိုးအစား) - ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်ပညာရှင်များလုံခြုံဒစ်ဂျစ်တယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်, တိကျမှု, ထယနေ့အထိ. သင်ကြား ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို.
Software Development - ချမှတ်ခြင်း applications များ (apps များ) လူတိုင်းကိုတဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်ထုံးစံနိုင်ပါတယ်. ဂိမ်းများနှင့်စမတ်ဖုန်းများအခြား application များလယ်ကွင်းကြီးထွားလာနေကြတယ်.
ကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအကြှနျုပျအဘို့, လက်ျာအလုပ် Are?
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်ရှင်များအားဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ကြောင့် Computer ကိုနည်းပညာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့ဘို့ကြီးစွာသောအကွက်ဖြစ်၏. သို့သော်လူတိုင်းမယ့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလုပ်ကိုင်ဖို့လိုလား. careeronestop.org မှာ Self-အကဲဖြတ်စမ်းသပ်မှုယူပါ
အလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်, အများဆုံးအလုပ်ရှင်များအတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဒီဂရီကိုရှာပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ဒီထက်အချိန် ယူ. အသစ်ရောက်ရှိလာသောပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသင်တန်းအများအပြားအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်.
Code ကိုအကယ်ဒမီ - တစ်ဦးလွယ်ကူသောအပေါ် coding လေ့လာသင်ယူ, အခမဲ့ပလက်ဖောင်း
FreeCodeCamp.org - လက်မှတ်ကမ်းလှမ်းနှငျ့သငျ Non-အမြတ်အစွန်းများအတွက်စီမံကိန်းများတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် programming သွန်သင်အခြားအခမဲ့ site ကို. သင်အနီးရှိလူများနှင့်ပူးပေါင်းရန်သင့်မွို့တှငျအုပျစု join လို့ရပါတယ်.
Khan Academy - အခမဲ့အတန်းအမျိုးမျိုးတို့ကို, များစွာသောကွန်ပျူတာ programming သင်တန်းတွေအပါအဝင်
ကို web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ငှားရမ်းထားရဖို့ကိုဘယ်လို - ထို Odin စီမံကိန်းကနေအတိုသင်တန်း
အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များတန်ဖိုးနည်းကွန်ပျူတာသင်တန်းများပူဇော်. သူတို့ကအထူးသဖြင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူအဘို့အအတန်းရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
Code.org ဒေသခံနိုင်တဲ့ coding အတန်းတစ်ဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်. အဆိုပါ site ကိုလည်းနိုင်တဲ့ coding ဂိမ်းများကိုတပ်ဆင်ထား, အားလုံးအသက်အရွယ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုလေ့လာသင်ယူ.
သငျသညျနည်းပညာအရည်အချင်းများသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတစ်ဒီဂရီရှိပါက, Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.
သင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုသုံးပါ: ခပ်သိမ်းသောမြို့အတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. Find သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာ.
အလွတ်တန်းအလုပ်အကိုင်များကိုရယူလိုက်ပါ: ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်တွင်တင် Upwork, အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်လွတ်ဘို့ website တစ်ခု.
အွန်လိုင်းကိုကွညျ့ရှု: အန်စာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအပါအဝင်ကွန်ပျူတာနည်းပညာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအထူးပြု, ဆော့ဖျဝဲ, အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, လုံခြုံရေးနှင့်ဇီဝနည်းပညာ.
သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာနှင့်အွန်လိုင်းမှာနည်းပညာသင်တန်းများ Find Launchcode
GlobalEnglish sign up ပြုလုပ်ပါ